I-Ultimaker Cura 4.11 ifika ngokuthuthukiswa kwesixhumi esibonakalayo nokuningi | Kusuka kuLinux
I-Ultimaker Cura 4.11 ifika ngokuthuthukiswa kwesixhumi esibonakalayo nokuningi
Okuhle | 14/09/2021 18:28 | Kubuyekezwe ku- 14/09/2021 22:29 | Aplicaciones
I- ukukhishwa kwenguqulo entsha ye-Ultimaker Cura 4.11 lapho i-interface yomsebenzisi ithole ukuthuthuka, kanye namamodeli amasha wokumodela, ukuthuthukiswa kokuhlanganiswa kwelabhulali nokunye okuningi.
Uma ungazi nge-Ultimaker Cura, ake ngikutshele ukuthi lokhu uhlelo lokusebenza olwenzelwe amaphrinta we-3D, lapho ungashintsha khona amapharamitha wokuphrinta bese uwaguqula abe yikhodi G. Yakhiwa nguDavid Braan, okwathi ngemuva kwesikhashana wasebenzela i-Ultimaker, inkampani ezinikele ekwakhiweni nasekukhiqizeni amaphrinta e-3D.
I-Ultimaker Cura Kubonakala ngokunikeza isikhombimsebenzisi sokuqhafaza ukulungiselela amamodeli wokuphrinta kwe-3D, okuyi Ilungiswa ngokuya ngemodeli futhi uhlelo lunquma isimo sephrinta ye-3D ngesikhathi sokusetshenziswa okulandelanayo kwesendlalelo ngasinye.
1 Izindaba eziyinhloko ze-Ultimaker Cura 4.11
2 Ungayifaka kanjani i-Ultimaker Cura ku-Linux?
Izindaba eziyinhloko ze-Ultimaker Cura 4.11
Kule nguqulo entsha yohlelo lokusebenza singathola ukuthi a imodi yokumodela ephezulu ye-Monotonic Top and Bottom ukwenza amasethingi wokuzuza indawo ebushelelezi neyunifomu ephrintiwe, ngokwesibonelo ukudala ama-demo prototypes ajabulisayo noma ukufeza ukuxhumana okusondele nezinye izingxenye uma kunesidingo.
Ngaphezu kwalokhu, singathola futhi ukuthi isikhombimsebenzisi somsebenzisi sibuyekeziwe, Yebo, kule nguqulo entsha ye-Ultimaker Cura 4.11 kunezelwe izithonjana ezintsha ezingaphezu kwekhulu ukwenza lula ukuhlonza imisebenzi ehlukahlukene, kanye nokukalwa kwezithonjana ngosayizi wewindi. Ukuhlelwa kabusha kokwakhiwa kwezaziso nezaziso.
Okunye ukuthuthuka okuhlobene yi- ukuhlanganiswa okuthuthukile neLabhulali yedijithali nokusebenzisana kumaphrojekthi okwabelwana ngawo kwasizwa. Kungezwe isici esisha sosesho lwelabhulali, esivumela ukuthi useshe ngegama lephrojekthi, amathegi nencazelo.
Futhi lapho ucwaninga izilungiselelo zokubonakala, okuqukethwe kwezincazelo zesethingi kuyabhekwa.
Kwezinye izinguquko okuvelele kule nguqulo entsha:
Kulungiswe inani elikhulu lezimbungulu
Izingqinamba ezilungisiwe ezikhiqizwe ekwakheni ngePython 3.8
Kungezwe amandla okubhala wonke amaphrofayili wezinto ezivela eceleni ku-USB drive yokuvuselelwa kwe-BOM okwenziwa ngamaphrinta e-3D.
Izincazelo zamaphrinta amasha nezinto zokwakha zingeziwe.
Kungezwe inketho yokubonisa izaziso lapho kukhishwa izinhlobo ezintsha zama-plugins nezingu-beta ze-Ultimaker Cura.
Okuqukethwe kwemininingwane ebhukwini kuthuthukisiwe ngolwazi mayelana nokwehluleka kokufakazela ubuqiniso.
Okokugcina Uma unesifiso sokwazi okwengeziwe ngakho, ungabheka imininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Ungayifaka kanjani i-Ultimaker Cura ku-Linux?
Kulabo abanentshisekelo yokukwazi ukufaka lolu hlelo lokusebenza ohlelweni lwabo, bangakwenza lokho ngokulandela imiyalo esabelana ngayo ngezansi.
Ngokuvamile ngeLinux, onjiniyela beCura sinikeze ifayela le-AppImage esingayithola kuwebhusayithi esemthethweni yohlelo lokusebenza. Isixhumanisi yilokhu.
Noma kulabo abakhetha ukusebenzisa i-terminal, bangathola iphakethe ngokuthayipha umyalo olandelayo:
Ngemuva kokulanda iphakheji sizokunikeza izimvume zokubulawa. Lokhu singakwenza ngokuchofoza okwesibili kwiphakheji futhi kumenyu yokuqukethwe siya enkethweni yezakhiwo. Ewindini elivulwe, sizibeka kuthebhu yezimvume noma esigabeni "sezimvume" (lokhu kuyahlukahluka phakathi kwezindawo zedeskithophu) futhi sizocofa ebhokisini "lokwenza"
Noma kusuka esigungwini singanikeza izimvume ngokwenza umyalo olandelayo:
Futhi i-voila, manje sesingaqalisa isifaki ngokuchofoza kabili kufayela noma kusuka ku-terminal ngomyalo:
Ekugcineni, esimweni se-Arch Linux noma okuphuma kukho, Singafaka uhlelo ngqo kusuka kumakhosombe we-Arch Linux (noma ngabe inguqulo indala). Ukuze senze lokhu kufanele sithayiphe nje:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Ultimaker Cura 4.11 ifika ngokuthuthukiswa kwesixhumi esibonakalayo nokuningi
kwenza Inyanga e-1
nomtapo wezincwadi nokuningi "okuningi". Mhlawumbe wayeqonde "okuningi" okuningi
I-Apple ilahlekelwa yinkantolo ngokumelene neMidlalo yama-Epic futhi umphumela usethe izibonelo
I-PeerTube 3.4 iza nohlelo olusha lokuhlunga ividiyo, ukuthuthuka nokuningi